Waa Maxay Cudurka &quot;Fomo&quot; Iyo Sida Looga Hortago | vfxAlert official blog
Cudurka «FOMO» - waa maxay iyo sida loola macaamilo
Xaaladda shucuureed ee ganacsadaha saamileyda ah had iyo jeer waa qodobka ugu muhiimsan ee saameeya natiijooyinka maaliyadeed. Mid ka mid ah dhibaatooyinka nafsaaniga ah ee ugu caansan uguna sirgarsan ee habka barashada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa FOMO syndrome. Dad badan ayaa la kulma khasaaro baaxad leh sababtoo ah cawaaqibka muujinta. Waa maxay dhibaatadani iyo sida loo dhaqmo markay soo baxdo, akhri maqaalkeena.
FOMO ee ganacsigu waxay u muuqan kartaa ganacsade, gaar ahaan bilow, inta badan fursad faa'iido. Soo gaabinta waxay u taagan tahay "Cabsida La Wayay" - "Cabsida ka maqnaanta dhacdo muhiim ah" ama "luminta cilladda cilladda." Maaddooyinka ku saabsan cilmi-nafsiga isweydaarsiga iyo ganacsiga binary, qeexitaanku wuxuu soo muuqday dhowaan, in kasta oo jawiga xirfadda lagu yaqaan tan iyo markii ay soo ifbaxday ganacsiga oo ah howlaha ugu weyn.
Sida falanqaynta farsamadu u leedahay qaababkeeda marka la samaynayo isbeddel, qaababka habdhaqanka qaarkood ayaa lagu raadin karaa cilmu-nafsiga aadanaha. Markasta oo qofku sifiican u fahmo dabeecaddiisa iyo ujeedooyinkiisa, ayay sii kordheysaa qalabka ay ku shaqeeyaan si aan shucuur lahayn, taas oo siinaysa faa'iido dheeri ah.
Aynu eegno wejiyadaha ugu muhiimsan ee «dabin» nafsi ah:
Sawirka, waxaad isla markiiba arki kartaa in shardiga ugu weyn ee muuqaalka FOMO uu yahay falanqeyn qaldan iyo xulashada barta soo gelida qaldan. Tani waa wax caan ku ah bilowga .
Dhibaatada FOMO waa mid nafsiyan ah, waxay muujineysaa dabeecad shaqsiyadeed oo ku wajahan naftiisa. Tusaale ahaan, ka dib boos aan lagu guuleysan oo la xiray, ganacsade ayaa falanqeynaya jaantuska iyo xaqiiqda ka dib waxay u aragtaa fursad la seegay. Muujinta kale ee dhibaatadu waa dareenka ah in kuwa kale ay guuleystaan. Si aad ugu muuqato mid guuleysanaya, qaar badan ayaa iska ilaaliya inay sheegaan qasaaraha soo gaaray. Oo waxaad umuuqataa karti badan kuwa kale. Kuwa bilowga ah waxay ku dadaali doonaan inay u ganacsadaan sida faa'iidada leh khibrad la'aantu waxay u horseedi doontaa qaladaad qaab lumis ah oo ku yimaada koontada.
Dareenka FOMO waxaa lagu muujin karaa:
• samir la'aan
Dareen la’aan ayaa horseedi doonta faa iidada muddada-dheer. Waxaa muhiim ah in sida ugu macquulsan loo xadido muuqaaladaan. Ganacsatada ku hoos jira saameynta FOMO waxay muujinayaan dabeecado isku mid ah, cilmi-nafsiyaadka cilmi-nafsiga waxay muujinayaan hadalada ugu waaweyn ee soo socda:
• "Qof walba wuu sameeyaa, ma xumaanayo" . Si indho la'aan ah u raacida dadka ama ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa u horseedi kara khasaaro weyn koontada. Waxaad ubaahantahay falanqeyn xanuun badan iyo sababo culus oo aad kufureyso ikhtiyaar.
• "Waxaan sameyn karaa lacag aad u badan!" . Ku ganacsashada rajo aan sal lahayn oo macaash ah ayaa dhif u horseedda faa'iido. Qofna ma oga goorta xitaa xaalada ugu xoogan ee isbeddelku dhammaan doono. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waqtiga ugu fiican ee la galo oo lala barbardhigo xaaladda hadda jirta iyo calaamadaha ganacsiga nool. Hubso inaad haysato xeeladaha ilaalinta ee lagama maarmaanka u ah kahortagga khasaaraha.
• "Waxaan u maleynayaa inaan isku dayi doono calaamaddan ama istaraatiijiyaddan" . Go'aan la'aanta noocan oo kale ah ee aan sal lahayn ma noqon karto sabab loo furo amar.
• "Waa inay ogaadaan wax aanan aqoon" . Waa laga yaabaa, laakiin aragtiyahaani weligood ma sii jiri karaan. Haddii dhaqdhaqaaq uu u dhacay sabab la aan gaar ah, waxay ka dhigan tahay in ugu dhakhsaha badan ama lagu xaqiijin doono wararka ama tilmaamayaasha dhaqaalaha, ama ay jirto wax ka beddel ku saabsan xiritaanka jagooyinka mugga ee kuwa sameeya suuqa.
• "Waxaan u baahday inaan ogaado in waxaani dhacayaan" . Is-hurguf ka dib markaad hesho khasaaro. Waxay ka hadlaysaa maqnaanshaha istaraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah u leh baaritaanka xogta taariikhiga ah.
• "Waxaan ka baqayaa inaan seego fursad weyn" . Tani waa cawaaqib toos ah oo ka imanaya la'aanta aragtida suuqa Ciyaaryahan Khibrad leh oo leh xeerar cad oo ficil loogu talagalay xulashooyinka furan.
• "Yaaniska Yabaan (pound, euro, dollar, Bitcoin, Litecoin, iwm) waa ikhtiyaar badbaado leh oo qurux badan, waan ku maalgashan doonaa" . Bayaanka laftiisa ayaa run u ah hanti kasta, laakiin sinnaba uma tilmaamayso xilliga ugu fiican ee la furayo.
Suuqa sababta FOMO
Dhammaan dhibaatooyinka nafsaaniga ah waxay muuqdaan ka dib markii "firfircoonaan" bannaanka ah, FOMO na waa laga reebi karaa. Xaaladdayada, "calaamadda" waxay noqon kartaa xaaladaha suuqa ee soo socda:
• «Isbeddel sarreeya» Ganacsaduhu waxaa laga yaabaa inuu rajo weyn ka qabo, laakiin xaaladda sarrifka saamiyada si dhakhso leh ayey isu beddeli kartaa, iyadoo aan kuu oggolaanayn inaad hesho faa'iido kugu filan sababo la xiriira shucuur aad u tiro badan.
• «Nasiib-wanaag nasiib ah» Dhowr ganacsi oo faa'iido weyn leh oo isku xigta. Fayo-dhawrku waa naafo yahay; hadafka ganacsiga binary waa «ikhtiyaar kale» oo aan lahayn calaamado adag. Tan waxaa had iyo jeer la socda khasaaro taxane ah; waxaa jira muuqaal FOMO ah oo aan kuu oggolaanayn inaad si deggan u falanqeyso suuqa
• «Kaliya qasaaraha» . Xaaladda ka soo horjeedda: haddii taxane ganacsi oo faa'iido leh ay raacdo niyadda khiyaanada leh, ka dib xulashooyin taxane ah ayaa ku xirmay luminta kalsoonida hoose ee naftiisa waxayna ka dhigeysaa mid shaki geliya calaamadaha istiraatiijiyadeed. Mar labaad FOMO.
• «Xanta». Macluumaadka ku saabsan faa'iidada weyn ee kaqeybgalayaasha suuqa ayaa mar kale hoos u dhigaya kalsoonida. Tan waxaa lagu soo bandhigi doonaa hubin la'aanta horay looga hadlay.
• «Kalsoonida xad dhaafka ah ee shabakadaha bulshada». Badanaa, macaamil faa'iido leh oo keliya ayaa la muujiyaa, waxayna doorbidaan inay ka aamusaan khasaaraha. Aaminsanaanta "ciyaartoydii waaweynaa" ee noocan oo kale ah waxay horumarin kartaa kalsooni darro ku timaadda awooddooda. Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in qof kastaa leeyahay 50% ixtimaal ah inuu macaash sameeyo markuu furayo. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah sida halista loo maareeyo.
• Mararka qaar FOMO ee ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah iyo kuwa yaryarba waxay sababi karaan isbeddello xooggan iyo dib u rogisyo; waxaan had iyo jeer raadineynaa sabab macluumaad (aasaasi ah).
Ganacsadaha Anshax marinta iyo Fomo Player
Kahor intaanan u gudbin talooyinka ku saabsan sida loo "daweeyo" cilladda, aan dul istaagno anshaxa. Laga yaabee inaan talo dambe loo baahnayn intaas ka dib. Marka farqiga u dhexeeya edbinta iyo ganacsade FOMO:
• Ta koowaad, marka lagu daro istaraatiijiyadeeda ama ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, had iyo jeer waa mid ka shakisan fikradaha dadka kale. Midda labaad waxay gaartaa inta badan go'aannada ku saabsan maqalka iyo tirakoobka wararka aasaasiga ah, kuwaasoo isu beddeli kara kuwo taban xilli kasta haddii xaaladda dhaqaale ee dhaqaale ay isbeddelayso adduunka ama waddan shaqsiyeed.
• Ganacsadaha leh anshaxa wuxuu doortaa nidaam maareyn lacageed oo raaxo leh had iyo jeerna wuu ku dhaqmaa, xitaa haddii aad u baahato inaad ka nasato ganacsiga. Xaaladda gadaal waxaa saameyn ku leh FOBO: mugga macaamilka iyo taariikhda uu dhacayo ikhtiyaarka ayaa si joogto ah isu beddelaya. Natiijo ahaan, waxaan helnaa kaliya khasaaro.
• Ganacsade leh asluub ayaa fahamsan in aqoonta cusub iyo qaababka lagu hagaajinayo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay tahay in lagu raadsado meherado aan faa'iido lahayn. Ganacsadaha FOBO wuxuu isku dayaa inuu isla markiiba iska iloobo wuxuuna si joogto ah naftiisa u xasuusiyaa faa'iidada kaliya, in kastoo tani ay noqon karto nasiib uun. Waxaa jiri kara xaalad labaad: khasaaruhu wuxuu u horseedaa walwal joogto ah, taas oo adkeyneysa in si deggan loo helo qalad. Hadday taasi tahay ikhtiyaarkaaga, akhri qaybta xigta.
Sida looga fogaado cilladda
Qof kastaa waa inuu fahmaa inuusan qofna ka badbaadi karin shucuurta ganacsiga. Dabcan, kuwa hadda bilaabaya inay bartaan ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, tani waxay keenaysaa dhibaatooyin badan. Xirfadlayaashu waxay kugula talinayaan inaad raacdo talooyinkaan:
• Markasta diyaar u noqo inaad furto xulashada xigta. Wax kastoo dareen ahaaneed xaaladda FOMO ay ka tagto, suuqa had iyo jeer wuxuu diyaar u yahay inuu bixiyo fursado aad u fiican. Waxa ugu muhiimsan waa in la xakameeyo shucuurta!
• Qof kastaa wuu u siman yahay suuqa. Iyadoo aan loo eegin khibrad, qadarka koontada ganacsiga iyo astaamaha shaqsiyeed, qof kastaa wuxuu geli karaa xaalado muujinaya muujinta FOMO. Haddii aad arrintan ugu tagto sidii arrin caadi ah, ugu dhakhsaha badan dhibaatadu mar dambe saameyn weyn kuma yeelanayso natiijooyinka.
• U hoggaansamida saxda ah ee istiraatiijiyadda ganacsiga ayaa gacan ka geysaneysa yareynta saameynta arrimaha maskaxda. Sidaa darteed, ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, sida dhinac kasta oo maaliyadeed, waxaa muhiim ah in la yeesho, iyo tan ugu muhiimsan, in had iyo jeer loo hoggaansamo qorshe ganacsi. Waa inay lahaataa sharciyo adag oo ku saabsan furitaanka, dayactirka, maaraynta lacagta iyo ikhtiyaarrada xiritaanka.
• Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu dhejiyo istiraatiijiyad ganacsi oo si fiican loo dhisay ayaa ah in la maal galiyo macaamil kasta xaddiga raasamaalka ee khasaaradiisu aysan u keenaynin dareen diidmo oo xoog leh, sidaa darteedna aysan u sababi doonin FOMO syndrome.
Aan soo koobno. Ka gudubka dhibaatada FOMO ma dhici karto; waxay qaadataa waqti cayiman. Iyo haddii mustaqbalka aad ogtahay farsamooyinka ay tahay in loo isticmaalo si looga hortago cawaaqibka xun ee shucuurta noocaas ah, qof kastaa wuxuu u keeni karaa ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ganacsiga heer faa'iido leh.